Makeup brashi-11 brashi
Yakasarudzika logo yakavanzika chitaridzi makeup brashi 11pcs matema ekuzora mabhurusi akaiswa nemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvebvudzi.
Yokutanga imwe:Iyi modhi yebrashi yekumisikidza yakaiswa mufashoni pamusika, iyo yakasikwa yekugadzira bvudzi yakapfava uye ine ganda-inoshamwaridzika.zvinhu zvekubata ndezvematanda izvo zvakasununguka uye zvinogara.
Yakakwira mhando yezvinhu zvakagadzirwa neyakagadzirwa fiber, yakapfava uye yakasununguka, ichipa hunyoro kubata uye kusiri-kudurura synthetic bristles kuona inotsvedza yekushandisa maitiro uye kushandisa ruzivo.
Yechipiri iwe unobata imwe yemabhurashi aya padama rako, iwe unoshamisika nekunyorova kunoita bristles. Iyi seti inoitirwa kutevedzera zvinoitwa nebrashi rekugadzira, zvichireva hwaro hwako, kuvanza, uye kutsvuka kuchashanda zvisina tsananguro.
Chigadzirwa zita Mashoko Style Zvinhu pane seti imwe Saizi Logo Pasuru
Makeup brashi yakaiswa Yakagadzirwa bvudzi, yemapuranga mubato mufashoni 11 Yakasarudzika saizi Yakasarudzika logo Yakagadziriswa kurongedza
Iko kuunganidzwa kwakazara kunoumbwa nemabhurashi gumi nemana ane akakwenenzverwa ruoko-akaumbwa vegan synthetic bristles. Iwo anobata anobatsira kupa kwekupedzisira kutonga mune yekushongedza application kuti ikubatsire iwe kugadzira chero yekuzora chitarisiko chaunoda. Iri bharashi mubato rakagadzirwa zvine mutsigo.
Chekutanga vatatu:Vatengi vazhinji vanotipa iwo akakwirira kwazvo maongororwo mushure mekunge vaedza, Mabrashi edu ari emhando yepamusoro, nekuti tiri fekitori yekugadzira, uye isu tine makore gumi nemashanu ehunyanzvi mune ino ndima.
Dhizaini dhizaini uye inokodzera mitsara yechiso, inokodzera kugadzirwa kwemazuva ese uye inogona kugadzira zvirinyore zvisina gadziriso kwauri.
Kana iwe uchitsvaga imwe yakasarudzika eco-hunyanzvi sarudzo, iyi yakakosha bhurashi yakatarwa kubva kuEcoTools inofanirwa. Iwo ari 100% vegan uye akagadzirwa kubva kune yakashandiswazve aluminium.
Chechina chekutanga:Yedu yekushandisa yekushandisa zvishandiso zvisina chaunoshandisa kutsvaira, kutenderera, uye kuisanganisa panzvimbo. Kunyangwe kugadzira maziso anopfungaira kana akachekwa matama, aya ndiwo maseti aunoda mune yako arsenal.
Iyi yekudzidzira bhurashi seti inosanganisira zvakakosha zvekukubatsira iwe kugadzira isina gwapa. Iyo seti inosanganisira bhurosi renheyo kuti ushandise hwaro hwako, bhurashi rekubhururuka kuti rienzane, tsananguro yekuvanza brashi yekuvhara zvisakakwana, uye rakakura rekuhwarira bhurasho pasi pemaziso uye kutenderedza nzvimbo yemhino. Iyo fashoni yeupfu bhurashi inopa zvese-pamusoro kupedzisa kune isina chakakora chitarisiko. Mabrashi ese anogona kunge ari muhombodo yakanaka yeganda yakanakira pakuenda kana kufamba.
Pashure: Tsananguro yepamusoro Kusatsigira Eyeshadow Palette - Maziso eziso-BD15-DW - JOYO
Zvadaro: Makeup bhurasho-14 bhurasho
Nyanzvi Makeup Brush Sets
Makeup bhurasho-14 bhurasho
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Matte Eyeshadow Palette, Shimmer Lipstick, Mini Lipstick, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Ndarama Ziso Makeup, Yakanakisa Makeup Brushes, Zvese Zvigadzirwa